Ukunyuswa kwe-J&M 2000 - Umbono Wethu
Umbono we-J & M Corporate emkhakheni we Imisebenzi Yezokuxhumana Yezinkampani kuyisifiso esithile kodwa kufinyeleleka kalula: Ukwakhiwa kweplatifomu yensizakalo njengoba kuchaziwe futhi kuhlukaniswa ngangokunokwenzeka okungaba yiphuzu ekubhekiswe kulo mkhakha futhi kube lula kakhulu ukulisebenzisa kepha ngesikhathi esifanayo kusebenza ngemiphumela.
Umbono omuhle kakhulu phansi kwephrojekthi enkulu.
Umbono we-J & M Corporate yi-Multimedia impela, njengoba sikholelwa ngokuqinile ekufakweni kokuqukethwe ngeziteshi ezahlukahlukene Zokuxhumana, futhi ikakhulukazi lezo eziphathelene neWebhu, ngokungafani nabanye abavumela umphakathi ukuba ukuxhumana nenkampani ezicebisa ngendlela Elula futhi eliqondile.
IWebhu, njengoba kumenyezelwe emashumini eminyaka adlule, manje isichithile uMhlaba ukuxhumana ngokuvamile, iminyango ivulekele amathuba amaningi, ikakhulukazi ezinkampanini, okubonga lezi zindlela ezingejwayelekile ziye zakwazi ekugcineni ukubhidliza izithiyo zesikhala nesikhathi futhi zifinyelele ezimakethe ezintsha ngakho-ke amakhasimende amasha.
Ukuxhumana ngezigaba eziningi nokuxhumana okuningi: isu lokuwina lebhizinisi lakho
Umbono we-J & M Corporate ihlose ukuthuthukisa kanye nokuthuthukisa ngangokunokwenzeka ithuba elinikezwe yiWebhu ukudala nokusabalalisa okuqukethwe Okuphezulu Kwekhwalithi okungasabela ngaso sonke isikhathi kuzidingo ezikhulayo zemakethe evele njalo futhi ifuneka ngokwengeziwe ngokuya ngemakethe Ukuxhumana kwezentengiso.
Ukuphathwa okulula nokuvuselelayo kokusebenza kwamapulatifomu
Ukusetshenziswa Kakhulu Kwezindleko Nemiphumela Yomphumela
Ukucacisa engxoxweni nekhasimende esigabeni ngasinye
Ikhwalithi ephezulu Nokulawula Ukuxazulula Izinkinga
Isevisi yokubuyela emuva kanye nosizo lokusebenza okuhle
Lona Esidlule - Esamanje - Umbono Wenkampani Yesikhathi Esizayo we-J & M.
Tags: izinkampani Ukunyuswa kweJ & M 2000 ukuqala okuhle